Ereyada La Adeegsado Marka Qof Ku Xumeeyo -Gabasha | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Waxaad ila dhaqantay sida ciyaal suuqii oo kale, kadib markaan raggii oo idil kaa xushay.
Waxaad igu soo celcelisaa ereyo bilaa micno ah, adoo iga luminaya waqtigayga qaaliga ah.
Waxaad ila jishaa jacayl been ah oo aan sal iyo raad toona lahayn.
Waxaad igu oran jirtay waan ku jeclahay laakiin waxaad iga necbayd qalbiga.
Waxaad dadka kale ugu sheekayn jirtay gabadhaas ayaan iska daba reebi waayay oo waa calaan, waxaan dhaho ayay qaadataa.
Waxaan ku dhahaa waan ku jeclahay anoo dunida ugu neceb, waa daacad oo amarkayga waxaan ahayn ma qaadato.
Waxaan ku xirtay qaful oo cidkale uma hanqal taagi karto.
Waxaan hayaa furaha lagu galo, laguna xidho kadib markii aan ku siiyay naftaydii oo idil.
Waan ogahay sidii aad ila dhaqantay, waxaadna iigaysatay dhib aan waligeed qof bini’-aadam ah loogaysan.
Waxaad dhaawacday qalbigayga, oo waxaad ka samaysatay daaro cadcad, kuwaasoo lidi ku ah dhammaan dareemayaashayda oo dhan.
Waxaan kuu ahaa daacad oo naftayda waan kaa jeclaa asii aad adigu igu ahayd cadaw.
Maanta waxaan dareemayaa walaac iyo niyad jab adi ayaa aboowe sabab u ahaa taas.
Naftayda maanta laga bilaabo waxay kuu tahay cadaw waayo waxaad iigaysatay dhibaato aad uweyn oo aan marnaba qalbigayga ka go’ayn.
Gacaliye ha ii imaan mardambe oo ha ila soo xiriirin waayo waxaad ummadda ugu sheekaysaa waxa aan ku hadalno xiliga haasaawaha beenta aad ila jilayso.
Waxaad inbadan ku andacootaa in aad tahay halyayga keliya oo noloshayda iska leh.
Asii aadan ahayn oo xaqiiqda ka dheertahay, waayo dumarku waa daacad una janjeera dhanka naxariista waana duul iska qalbi jilicsan wixii lagu amaanaysto waa dad loogu yimaado xilikasta oo loo baahdo.
Waxaad dhahdaa ani adi keliyaa ku jeclahay laakiin ani keliyaa igu neceb tahay dhab ahaantii.
Waxaad dhahdaa waan ku jeclahay balse waxaad uurka iyo qalbiga ka dhahdaa waan necbahay oo arageeda layma tusikaraayo qoftaas.
Khiyaanada aad naftayda ku wadid waan ogahay laakiin waxaan isdhahaayay mar uun buu ka noqon doonaa khaladaadkiisa, waayo waxaan ahaa qalbi wax jecel oo aan noolaan Karin saacad iyo hal daqiiqo wax leeg.
Maanta waxaan kuu soo gudbinayaa fariintaydii ugu dambaysay abid aan kuu soodiro waxaana ku leeyahay macsalaamo jaw isma arki karno oo muugaaga iyo muuqaaga iga qari waxaadna tahay wax la arko oo la maqlo oo la xasuusto oo dhaca kan ugu daran oo naf bini aadam ah soomarta.
Tags: Ereyada La Adeegsado Marka Qof Ku Xumeeyo -Gabasha
Next post Caruurtii Rasuulka SCW
Previous post Ereyada La Adeegsado Marka Qof Ku Xumeeyo - Wiilka